ကြည့်ရှုသူ သန်း ၉၀ နီးပါးစီ ဖြစ်သွားတဲ့ Black Pink ရဲ. သီချင်းနှစ်ပုဒ် | Buzzy
ကြည့်ရှုသူ သန်း ၉၀ နီးပါးစီ ဖြစ်သွားတဲ့ Black Pink ရဲ. သီချင်းနှစ်ပုဒ်
ဘာကြောင့်များ ဒီလောက် လူကြည့်များရတာလည်း ? ထွက်တာမှ သိပ်မကြာသေးပဲ
သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့က စတင်ဖြန့်ချီိလိုက်တဲ့ Black Pink အဖွဲ့ရဲ. WHISTLE နဲ့ BOOMBAYAH သီချင်းနှစ်ပုဒ်ဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ အံ့သြလောက်စရာကောင်းအောင် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ကြည့်ရှုသူပေါင်း သန်းကိုးဆယ် ဝန်းကျင်ဆီ ရှိနေကြတာပါ။
သွဂုတျလ ၈ ရကျနကေ့ စတငျဖွနျ့ခြီိလိုကျတဲ့ Black Pink အဖှဲ့ရဲ. WHISTLE နဲ့ BOOMBAYAH သီခငျြးနှဈပုဒျဟာ ယခုအခြိနျမှာတော့ အံ့သွလောကျစရာကောငျးအောငျ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိ ကွညျ့ရှုသူပေါငျး သနျးကိုးဆယျ ဝနျးကငျြဆီ ရှိနကွေတာပါ။